onTouch English Dictionary - Android အတွက်အော့ဖ်လိုင်း APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » onTouch အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန် - အော့ဖ်လိုင်း
onTouch အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန် - အော့ဖ်လိုင်း APK ကို
တွေ့ဆုံ, onTouch English အဘိဓါန်, အဘိဓါန် app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ၏အဓိပ္ပါယ် / အဓိပ္ပာယ်ကိုပြသထားတယ်။ apps များအကြား switching ၏အဘယ်သူမျှမလုပ်ရတဲ့။ အချိန် Save, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ သင်တို့သည်လည်းပုံမှန် English အဘိဓါန်အတိုင်းဤသုံးနိုင်သည်။
ဒါဟာဤအရပ်ကအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မလိုပဲ run ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအော့ဖ်လိုင်းအဘိဓါန်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု download လုပ်ပါ။
definitions အင်္ဂလိပ်အပေါ်အခြေခံထားတယ် Wiktionary မှ ဤအရပ်မှသူတို့ပြည့်စုံခြင်းနှင့်နားလည်ရန်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြသည်။ နှင့် Wiktionary မှသငျသညျကိုအကောင်းဆုံးရ အဓိပ်ပါယျ synonym တွေဟာ, နာမ်နှင့်ဥပမာစာကြောင်းများ.
ဤ အဘိဓါန် စံပြကျောင်းသားများ, ပညာရှင်များနှင့်ပညာရှင်များအဖြစ်အလုပ်သို့မဟုတ်အိမ်မှာလက်ရှိအင်္ဂလိပ်တစ်ဦးပြည့်စုံနှင့်သော authoritative အဘိဓါန်လိုအပ်ကြောင်းသူမည်သူမဆိုအဘို့ဖြစ်၏။
ကနေယုံကြည်စိတ်ချရသောရည်ညွှန်းအကြောင်းအရာအပြင် Wiktionary မှ, ဒီ app ကအောက်ပါအင်္ဂါရပ်များထောက်ပံ့:
Big ဒေတာဘေ့စ: 350,000 စကားလုံးများကိုနှင့်သင့်ဝေါဟာရကြွယ်ဝစေရန် inflected ပုံစံများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကထက် ပို. ။
သင့်ရဲ့ဒေတာဘေ့စ modify: ဒေတာဘေ့စထံမှ / သို့မဆိုစကားလုံး ADD သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်။ မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိအဘိဓါန်မိမိစိတ်ကြိုက်။
နေ့၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို: အသစ်တစ်ခုကိုစကားလုံးနှင့်သင်၏ Vocab တိုးပေးရန်နေ့တိုင်း
မကြာမီက / အကြိုက်ဆုံးစကားလုံးစာရင်း: မကြာသေးမီကစကားလုံးများကိုရှာဖွေအကြိုက်ဆုံးစာရင်းထဲသင်အကြိုက်ဆုံးစကားလုံး add ခြေရာခံထားပါ။
စကားစာသား: app ကိုအော့ဖ်လိုင်းအသံထွက်အင်္ဂါရပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်မည်သည့်စကားလုံးကိုအဘို့အထွက်စကားကိုနားထောင်ကြလော့။ မှတ်ချက်: အသံထွက်စကားသံကိုဒေတာ (Text-to-မိန့်ခွန်းအင်ဂျင်) သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတပ်ဆင်ပြီသာလြှငျအလုပ်ဖြစ်တယ်စကားလုံး။
စာလုံးပေါင်းအကြံပြုချက်များ - မှန်ကန်စွာစာလုံးပေါင်းမသိကြသမျှစိုးရိမ်ပူပန်စကားအော်တိုအကြံပြုချက်များနှင့်အတူစာလုံးပေါင်းဘယ်လိုကူညီရ။
အော့ဖ်လိုင်း & ပိုမြန်: ကတစ်အော့ဖ်လိုင်းအဘိဓါန်ကြောင့်အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့အလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေသည်။ (အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သောမဟုတ်ပါဘူး) ။
auto-Start ကို: အဘိဓါနျ device ကိုများ boot တက်စဉ်အတွင်းမှာအလိုအလျောက်စတင်များနှင့်နောက်ခံကနေအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဒီ feature ကိုလည်းအဓိကလျှောက်လွှာ၏ setting ထဲကနေ on / off လှည့်နိုင်ပါသည်။
လိုက်ဖက်တဲ့: OK ကိုဘရောက်စာများ (Chrome, Opera က), PDF ဖိုင်ရယူရန် Reader ကို (Adobe Acrobat), e-စာအုပ် Reader ကို (မွန်း + Reader ကို), Facebook က, WhatsApp ကိုအများအပြားပိုပြီးနှင့်အတူစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
onTouch English အဘိဓါန်သုံးပြီးချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ:
(Pop-up အဓိပ်ပာယျ) feature #1
1 ။ သင်တို့အဘို့အဓိပ္ပါယ်ရချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကို Select လုပ်ပြီးကိုင်ထားပါ။
2 ။ တစုံတယောက်သောသူသည်ကိုရွေးချယ်ပါ:
အရာက Options Menu ကိုကနေမိတ္တူ option ကိုအပေါ်ဗြဲကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
II ကို။ အရာက Options Menu ကိုကနေ '' Define '' option ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ (က Android Marshmallow ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်သာအလုပ်လုပ်)
3 ။ အဓိပ်ပာယျကို screen ပေါ်မှာ right အဲဒီမှာပြသပါလိမ့်မည်။
အင်္ဂါရပ် #2 (Floating ရှာရန် Widget လေး)
1 ။ က Settings ထဲကနေရေပေါ် Widget လေး Enable လုပ်ထားပါ။
2 ။ အဆိုပါရေပေါ်အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ရေပေါ်ရှာရန် Widget လေးထဲတွင်စကားလုံးရိုက်ထည့်ပါ။
3 ။ ထိုအခါ floating ပြတင်းပေါက်၌တရားအဲဒီမှာအဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ settings ကို:
ဘတ်ရွတ်အတွေ့အကြုံကိုဝေဒနာတွေဖို့အကောင်းဆုံးအရောင်အစီအစဉ်နှင့်အတူ♦အမှောင်နှင့်အလင်း themes များ
♦မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအင်္ဂါရပ် Enable သို့မဟုတ် disable
လူသိများကိစ္စများ / ချို့ယွင်းမှုများ:
•မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း MI ဖုန်းများသည်, အင်္ဂါရပ် #1 အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
•တချို့ Android ထုတ်ကုန်များအတွက် feature ကို #1 အနည်းငယ် PDF ကိုစာရှုသူများမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
•ကြော်ငြာအခမဲ့ - ပရီမီယံဗားရှင်းအဘယ်သူမျှမကြော်ငြာများ။
•ထိုနေ့၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို - သင်ကတစ်ရက်အင်္ဂါရပ်၏စကားလုံးများအတွက်အချိန်သတ်မှတ်နိုင်သည်
ကြင်နာစွာ ontouchdictionary@gmail.com @ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမြားနှငျ့တုံ့ပြန်ချက်ပေးပို့ပါ။
Floating Widget လေး feature ကိုယခု Oreo 8 နှင့်အထက် fixed ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့အင်္ဂါရပ်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလည်း fixed ဖြစ်ပါတယ်။
onTouch အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန် - အော့ဖ်လိုင်း
55.87 ကို MB
Adroit Apps ကပ
ရာသီဥတုတိုက်ရိုက် Wallpaper ။ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လက်ရှိခန့်မှန်းချက်